अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारी नै मृत भेटिएपछि… – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारी नै मृत भेटिएपछि…
अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारी नै मृत भेटिएपछि…
admin October 5, 2021 Uncategorized 0
सप्तरी- राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत एक कर्मचारी आफ्नै काठोमा आज मृतावस्थमा भेटिएका छन् । प्रहरीका अनुसार सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–२ की २६ वर्षीया रुवीकुमारी साफीलाई आफ्नै कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार सासू र देवरले रुवीको तलब हात पार्न निकै प्रयास गरेपछि उनी घरेलु हिंसामा परेकी थिइन् । रूवी र राजनका दुई छोराछोरी छन् । घरझगडा सहन नसकेपछि आत्महत्या गरेको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले बताए ।
घटना रहस्यमय देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा ३ जना पक्राउ परेका छन् । सल्यानका प्रहरी प्रमुख डिएसपी गोविन्द थापाले जेसिबी चालक, साहु र सहचालकलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । महिलाको शरिरमा देखिएको चो ट ले उनको वास्तविक मृत्यु नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ । रामकली त्यो बाटोमा हिडेको समयमा जेसिबी बाहेक अन्य कुनै सवारी साधन पनि नहिडेको अनुसन्धानवाट देखिएपछि जेसिबी चालक, मालीक र सहचालक पक्राउ परेका हुन् ।
रामकलीको कान, ढाड, हातमा गाडीले कु चेको जस्तो घाउ देखिएको डिएसपी थापाले बताए। डिएसपी थापाका अनुसार शनिबार साँझ साढे ५ बजेतिर घरदेखि माइती घर जान्छु भनी हिँडेकी खत्रीको श व आइतबार बेलुका साढे ७ बजेतिर बीच बाटोमै फेला परेको थियो। खत्री हिँडिरहेको बाटोमा उक्त दिन जेसिबीले सडक मर्मतको काम गरिरहेको हुँदा आशंका बढेको प्रहरीले जनाएको छ।
अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलनमा यस्तो थियो कुर्सी हानाहान
सपनामा यी ५ चिज देख्नुभयो ? उसोभए तपाई छ्ट्टिै धनी बन्नुहुनेछ
पहिरोमा पुरिएर ४ जनाको गयो ज्यान!
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन १३ गते शनिबार
नेपालको पूर्वी जिल्लाहरूमा भूकम्प गएपछि सबै सडकमा निस्के…